नेपाललाई एकै दिनमा १५ स्वर्ण, खेलकुदको बजेटमा मन्त्रीहरुलाई दौरा सुरुवाल
काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित मंगलबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले नेपालमा जारी १३ औं साग नेपालले दमदार सुरुवात गरेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् ।
सागको औपचारिक उद्घाटन भएको भोलिपल्ट हिजो(सोमबार) एकै दिनमा नेपालले १५ स्वर्ण पदक हात पारेको छ । योसँगै ३ रजत र ६ कांस्य गरेर नेपालले अहिलेसम्म २४ पदक जित्दै नेपाल अंक तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ ।
भारत ३ स्वर्णसहित १४ पदकका साथ तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ भने श्रींलका ३ स्वर्णसहित २४ पदकका साथ तेस्रो स्थानमा छ ।
पाकिस्तान २ स्वर्णसहित १३ पदकका साथ चौथो स्थानमा छ । बंगलादेश २ स्वर्णसहित १८ पदकका साथ पाचौं स्थानमा छ । भुटानले अहिलेसम्म एउटा कास्य पदक जितेको छ भने माल्दिभ्सले खाता नै खोल्न सकेको छैन् ।
यसै विषयलाई मुख्य समाचार बनाउँदै नागरिक दैनिकले नेपालको दमदार सुरुवात शीर्षकमा खबर लेखेको छ भने अन्नपूर्ण पोस्ट्ले नेपाललाई १५ स्वर्ण शीर्षकमा खबर छापेको छ ।
कान्तिपुर दैनिकले नेपाललाई १५ स्वर्ण जिताउने क्रममा कतारेका मण्डेकाजी श्रेष्ठ र तेक्वान्दोकी आयशा शाक्यले २/२ स्वर्ण जितेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । उसले दुई/दुई स्वर्णको कथा शीर्षकमा खबर लेखेको छ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले भने सागको बजेटमा मन्त्रीहरुले दौरा सुरुवाल सिलाएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।
उसले समाचारमा लेखेको छ- मन्त्रीसहित ४० जना उच्च पदाधिकारीलाई दौरा–सुरुवाल–कोट र टोपी मात्र होइन, छालाको कालो जुत्ता र मोजा पनि निःशुल्क दिइएको छ । तर, नेपाली खेलाडीले दौरा–सुरुवालमा मार्चपास्ट गर्ने भनिएकोमा क्रिकेट खेलाडीका लागि दौरा–सुरुवाल सिलाउन नभ्याइएको भन्दै उनीहरूलाई ट्र्याक–सुटमै हिँडाइएको थियो ।
मन्त्री भएर शपथ खाँदासमेत गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले दौरा–सुरुवाल लगाएनन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको स्वागतमा विमानस्थलमा उपस्थित हुँदा अनिवार्य रूपमा दौरा–सुरुवाल लगाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदा पनि बादलले अस्वीकार गरे ।
तर, आइतबार रंगशालामा उनी अचानक दौरा–सुरुवालमा प्रकट भए, यो दौरा–सुरुवाल दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) आयोजक समितिको तर्फबाट उनले निःशुल्क पाएका थिए ।
नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारअनुसार गृहमन्त्रीलाई मात्र होइन, उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्मालगायत ४० जना भिआइपीले सित्तैमा दौरा–सुरुवाल पाएका छन् ।
सागका लागि विनियोजित बजेटबाट उनीहरूले छालाको कालो जुत्ता, मोजा र टोपीसम्म पाएका छन् ।तर, दुर्भाग्य ! नेपाली खेलाडीले दौरा–सुरुवालमा मार्चपास्ट गर्ने भनिएकोमा क्रिकेट खेलाडीका लागि दौरा–सुरुवाल सिलाउन नभ्याइएको भन्दै उनीहरूलाई ट्र्याक–सुटमै हिँडाइएको थियो । खेलकुदको पैसा दुरुपयोग भएको भन्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दौरा–सुरुवाल अस्वीकार गरेका छन् ।
आयोजना र व्यवस्थापनका लागि सरकारले पौने चार अर्ब रकम विनियोजन गरेको छ ।
यो रकमबाट नेपालसहित दक्षिण एसियाका सात राष्ट्रका खेलाडी, प्रशिक्षक, प्राविधिक र प्रतिनिधि गरी झन्डै ६ हजार सहभागीको नेपाल बसाइ व्यवस्थापन हुनेछ ।
यही रकमबाट नेपाली खेलाडीको तयारी पनि गर्नुपर्नेछ । तर, आर्थिक रूपले पनि आफ्नो पोसाक आफैँ व्यवस्था गर्न सक्ने विशिष्ट व्यक्तिहरूले खेलकुदका लागि आएको रकमबाट एक–एक जोर कपडा जोडेका छन् ।
साग प्रतियोगिता आयोजनाका लागि मन्त्रिपरिषद्ले नै प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशन समिति गठन गरेको थियो । यी मन्त्रीहरू समितिका सदस्य छन् ।
समितिमा प्रदेश नं. ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी पनि छन् । उनीहरूका लागि पनि एक–एक जोर कपडा व्यवस्था भएको छ ।